Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii caadiga ahaa ee Gudiga Fulinta ee JWXO
Shirkii caadiga ahaa ee Gudiga Fulinta ee JWXO
Guddiga Fulinta Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) ayaa Kulan Sabtidii 19ka Oktobar 2012 isugu yimid Khadka-teleefoonka-kulanada. Kulanka oo muddo dheer qaatay ayuu Guddigu ku qiimeynayey Xaladaha Halganka xaqa ah ee dadka Somalida Ogadenya ugu jiraan madax banaadidooda, natiijadii ka soo baxday shirkii wadahadalkii istaagay ee u dhexeeyey JWXO iyo Itoobiya kana socday Nairobi iyo guud ahaan isbadalada ka jir Geeska Afrika.
Wuxuu Guddigu si weyn u bogaadiyey horumarka halganka uu gaadhay dhinac kasta. Waxaa hoosta laga xariiqay in loo baahan yahay in la sii xoojiyo halganka dibad iyo midka gudahaba iyada oo aad loogu bogaadiyey amaan badana loo soo jeediyey CWXO oo runtii cadowga dalka haysta murugada weyn ku riday xarumaha laga maamulo.
Burburinta wadahadalka waxaa hubaal ah inuu ku ceeboobay Taliska Addis Ababa oo dhamaan xoogaga jecel cadaaladda iyo xoriyadda ay cambaareeyeen. Waxaa meela kala duwan oo caalamka ah iyo dadweynaha Somalida Ogadenya ay ugu hambalyeeyeen mawqifka JWXO oo ka turjumay dariiqa ugu haboon ee nabad lagu gaadhi karo.
Guddiga Fulinta wuxuu aad ugu faraxsan yahay sida ay shacabka u soo dhaweeyeen go’aankii uu qaatay wafdigii wadahadalka uga qaybgalay JWXO. Waxay Xubnaha GF ugu baaqayaan dhamaan shacabka S.Ogadenya inay sii laba-laabaan halganka ay ugu jiraan aaya-ka-tashigooda oy ogaadaan in Xoriyadda aan lagu gaadhin waxaan ahayn halgan dheer oo naf iyoo maalba loo horey.
Guddigu wuxuu u arkaa in Somaliya ay ka socdaan isbeddelo taariikhi ah kadib doorashadii iyo hirgelintii hayadii qaranka iyo madaxdii ummadda taas oo u horseedi doonto dalka Somaliya iyo guud ahaan gobolka degenaansho iyo xasilooni. Wuxuu Guddigu u tahniyeynayaa Madaxda cusub ee Somaliya, wuxuuna Eebbe uga baryi inuu hawlahooda u fududeeyo.